Mpizahatany miala sasatra amerikana mijanona ao an-trano rehefa misidina ny tranga COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Mpizahatany miala sasatra amerikana mijanona ao an-trano rehefa misidina ny tranga COVID-19
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Miakatra ny tranga COVID-19 ary mitombo ny ahiahy momba ny dia rehefa miditra amin'ny fararano sy ny ririnina isika, dia eo am-piandohana ny indostrian'ny hotely.
Ny 69% amin'ireo mpitsangatsangana any Etazonia dia mety hanao dia kely kokoa.
42% amin'ireo mpandeha fialamboly amerikana no mety hanafoana ireo dia efa misy.
55% amin'ireo mpandeha fialamboly amerikana no mety hanemotra ny dia efa misy.
Mikasa ny hibebaka lavitra ny drafitry ny dia ataon'ny mpitsangatsangana amerikana ao anatin'ny tranga COVID-19 miakatra, miaraka amin'ny fikasana 69% handray dia vitsy kokoa, fikasana 55% hanemorana ny drafitry ny dia efa misy, ary 42% azo inoana fa hanafoana ny drafitra efa misy nefa tsy mametra ny fandaharam-potoana, hoy ny vaovao fanadihadiana nasionaly natao tamin'ny anaran'ny Fikambanan'ny hotely sy hotely amerikanina (AHLA). Manakaiky ny telo amin'ny efatra (72%) dia toa mandeha amin'ny toerana lavitra amin'ny halaviran'ny fiara ihany.
Raha manomboka mihena ara-tantara ny fitsangatsanganana aorian'ny fialan'ny mpiasa, dia manankarena foana mandritra ny taona. Ny fanadihadiana vaovao dia manasongadina ny vokatra ratsy ateraky ny areti-mandringana amin'ny dia ary manasongadina ny filàna fanampiana vonjimaika federaly, toy ny Save Hotel Jobs Act.
Maherin'ny iray amin'ny asa hotely dimy very nandritra ny areti-mandringana - efa ho 500,000 ny totaliny - no tsy hiverina amin'ny faran'ity taona ity. Ho an'ny olona 10 miasa mivantana amin'ny trano fandraisam-bahiny dia manohana asa 26 fanampiny ao amin'ny fiarahamonina ny trano fandraisam-bahiny, manomboka amin'ny trano fisakafoanana sy antsinjarany ka hatramin'ny orinasa mpamatsy trano fandraisam-bahiny — izany hoe asa fanampiny 1.3 tapitrisa fanampiny no tandindomin-doza.
Ny fanadihadiana ny olon-dehibe 2,200 11 dia notontosaina ny 12-2021 aogositra 1,707. Amin'ireny dia olona 78 2021, na XNUMX% amin'ireo mpamaly, dia mpitsangatsangana - izany hoe ireo izay nilaza fa afaka mandeha miala voly amin'ny taona XNUMX. manaraka:
Ny 69% dia mety hanao dia kely kokoa ary 65% ​​dia mety hanao dia fohy kokoa
42% dia mety hanafoana ny drafitry ny dia efa misy ary tsy misy drafitra hanarenana azy ireo intsony
55% dia mety hanemotra ny drafitry ny dia efa misy mandrapahatongan'ny daty manaraka
Ny 72% dia toa tsy mandeha afa-tsy amin'ny toerana azony itodihana
70% no toa mandeha miaraka amina vondrona kely kokoa
Miakatra ny tranga COVID-19 ary mitombo ny ahiahy momba ny dia rehefa miditra amin'ny fararano sy ny ririnina isika, dia eo am-piandohana ny indostrian'ny hotely. Raha tsy Kongresy fihetsika, fihenam-bidy mifandraika amin'ny areti-mandoza dia hitohy handrahona ny fiveloman'ny mpiasa hotely ana hetsiny. Nandritra ny herintaona mahery, ny mpiasan'ny hotely sy ny tompona orinasa kely manerana ny firenena dia nangataka fanampiana tamin'ny kongresy mivantana tamin'ny Kongresy. Ity data ity dia manasongadina ny antony fotoana tokony hiasan'ny Kongresy.
Vao haingana AHLA ny valin'ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny mpandeha raharaham-barotra dia miverina mamerina ny drafitra fivezivezeny ao anatin'ny fiakarana tranga COVID-19. Tafiditra ao anatin'izany ny drafitra 67% handray dia vitsy kokoa, ny 52% azo inoana fa hanafoana ny drafitry ny dia efa tsy misy famerenam-potoana, ary ny drafitra 60% hanemorana ny drafitry ny dia efa misy.
Ny trano fandraisam-bahiny ihany no ampahany amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny sy fialam-boly mbola mahazo fanampiana mivantana na dia anisan'ny tena voa mafy aza. Kongresy amerikana dia entanina mba handany ny lalàna momba ny Save Hotel Jobs Act izay natolotry ny loholona Brian Schatz (D-Hawaii) sy ny Rep. Charlie Crist (D-Fla.). Ity lalàna ity dia hanome làlam-pandrosoana ho an'ireo mpiasan'ny hotely, hanome ny fanampiana ilain'izy ireo hivelomana mandra-piverin'ny dia amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra.
September 30, 2021 ao amin'ny 06: 35
Raha mahatsiaro marary ianao na tsy salama dia mijanona ao an-trano. Miresaha amin'ny dokotera raha ilaina. Mba hamerana ny fiparitahan'ny coronavirus any Canada dia apetraka ny famerana ny fivezivezena manerana ny fiampitana sisintany rehetra. Valio ny fanontaniana vitsivitsy hahitanao azy.